Apple wuxuu "kireystaa" madaxweyne ku xigeenka horumarinta jiifka ee Porsche | Waxaan ka socdaa mac
Apple 'wuxuu shaqaaleeyaa' madaxweyne ku-xigeenka Porsche chassis development
Hal shay ayaa aad u cad: "markuu wabiga dhawaaqo, biyuhu way socdaan." Iyo beryahan wabiga loo yaqaan «Apple Car»Maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo garaaceysaa. Xanta maanta waa mid nool oo wanagsan, waxayna leedahay magac ugu dambeeya iyo kan dambe: Manfred Harrer.
Ninkaan wanaagsan wuxuu noqdaa fuliyaha sare ee Porsche. Waa ku-xigeenka Madaxa Horumarinta Chassis ee shirkadda gawaarida isboortiga Jarmalka. Marka laga reebo haysashada kaar ganacsi oo dheeri ah, (si loo helo booska lagu qoray Jarmal), waxay umuuqataa inuu katagay shirkadii Jarmalka uuna u saxiixay Apple. Waxaan u maleynayaa in loo qaabeeyo iPhone oo leh wax dhaca ma noqon doono….
Sida maanta la daabacay Gudaha Deutschland, Apple ayaa hada saxeexday Dr. Dilaaga Manfred, Madaxweyne kuxigeenka Horumarinta Chassis ee Porsche. Bayaanka ujeedooyinka.
Haddii ay dhacdo inuu jiro wax shaki ah, saxeexan Apple waxay dib u xaqiijineysaa ujeedkeeda ah inay u rogto mashruuceeda "Apple Car" gawaarida la isticmaali karo mustaqbalka, iyadoo shaqaaleysiineysa maamule sare oo ka shaqeeya horumarinta jirka si loogu aqoonsado sumcadda Porsche.
Dr. Harrer wuxuu in ka badan toban sano oo khibrad ah ku leeyahay shirkadda Jarmalka. Isaga ayaa ah mashruuca taxanaha cayenne, Waxayna mas'uul ka tahay horumarinta qalabka gawaarida cusub ee isboortiga tan iyo 2016.
Maqaalka ayaa sharxaya in Porsche, Apple iyo Dr. Harrer ay diideen inay ka hadlaan wararka. Hyundai, dhanka kale, way jahwareertay maalmo iyadoo lala xiriirinayo xiriirro u dhexeeya maareeyayaasheeda iyo kuwa Cupertino.
Horaantii bishaan, Hyundai waxay sheegtay inay wadahadal hordhac ah kula jirtay Apple oo ku saabsan soo saarista mashruuca baabuurkeeda. Warbixinno dheeri ah ayaa xaqiijinaya in labada shirkadood ay heshiis gaaraan isla bishaan Maarso iyadoo ujeedadu tahay soo saarista gawaarida Apple 2024.
Waxaa laga yaabaa in waxa ugu badan ee laga hadlayo ay tahay ku dhawaaqista rasmiga ah ee hogaamiyaha qalabka Apple, Dan riccio, ayaa hawlaheeda ku wareejinaya John ternusMarka Riccio wuxuu naftiisa u huri karaa "mashruuc cusub" shirkadda Apple. At Apple Speak, tani waa sida shirkaddu si aan rasmi ahayn ugu dhawaaqdo qayb cusub oo alaab ah. Wax weyn ayaa ka karinaya Apple Park ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple 'wuxuu shaqaaleeyaa' madaxweyne ku-xigeenka Porsche chassis development
Ilaa € 185 qiimo dhimis ah markaad iibsaneyso Apple Watch